Sergio Aguero Oo Magacaabay SHANTII Ciyaartoy Ee Uu Ku Dayan…
By jojo Last updated Apr 5, 2020
Weeraryahanka Manchester ee Sergio Aguero ayaa magacaabay shantii Laaciib ee uu ku dayan jiray markii uu da’yarta ahaa, kuwaas oo ahaa xiddigaha uu mar walba daawan jiray ee uu isku dayi jiray inuu sidooda u ciyaaray.
Aguerio oo ah ciyaartoyga ugu goolasha badan taariikhda Manchester City, waxa uu shabaqa taabsiiyey 180 gool oo Premier League ah tan iyo markii uu uga soo wareegay Atletico Madrid, waxa uu tilmaamay inuu raadkooda raaci jiray afar ciyaartoy oo Latin America kasoo jeeda iyo mid Ingiriis ah.
“Markii aan aadka u yaraa, waxaan in badan eegi jiray Javier Saviola xilligii uu u ciyaari jiray River Plate. Kaddib waxaan raadkiisa raacay Tevez, Juan Roman Riquelme, kaddib Ronaldo-ha ka yimid Brazil. Waxa kale oo aan jeclaa Michael Owen. Inta badan ciyaartoygaas ayaa ahaa kuwa aan jeclaa ee aan isku dayi jiray inaan sidooda u ciyaaro, markii aan yaraa.” Ayuu yidhi Sergio Aguero oo bixiyey waraysi.
Dhinaca kale, Manchester City ayaa maanta qaadday tallaabo ay ku kasbatay shacbiyad iyo taageero badan, taas oo bahdilaad ku ahayd Liverpool oo ay xafiiltamayaan.
City ayaa shaacisay in dhamaan shaqaalaheeda ay mushaharkoodu u soconayaan muddada lagu jiro kala-xidhnaanta, halka Liverpool shaqada ka fadhiisisay shaqaalaheedii.
Man City ayaa shaacisay in ayna mashruuca dawlada UK ee shaqaalaha ayna ka faa’iidaysanayn balse ay taas badalkeeda ka go’antahay in ay dadka kooxdeeda sii ilaashato oo ay mushaarkooda u sii wadi doonto.
Afhayeen Manchester City u hadlay ayaa shaaciyey go’aanka kooxdooda, waxaanu yidhi: “Waxaanu xaqiijin karnaa in kadib go’aankii gudoomiyaha iyo boodhka ee todobaadkii hore, in Manchester City ayna ka faa’iidaysan doonin mashruuca ilaalinta shaqada dawalada UK ee coronavirus.
“Waxaa naga go’an in aanu ilaalino dadkayaga, shaqadooda iyo ganacsigayaga, iyada oo aan isla mar ahaantaa samaynayno wixii caawin ah ee aanu bulshadayada balaadhan u awoodno ee waqtigan aadka ugu adag qof kastaba”.
jojo 1034 posts
“Xukuumadda Soomaaliya ee hadda talada haysa waxa ay…
Wasiiru katirsan Xukuumadda Gobaladda Waqooyi oo laga…
Hogamiye Qoor-Qoor oo tagaya Deegaanno dhaca…
Hong Kong leaders accuse US of “double…
Prev Next 1 of 1,481